Toni Kroos oo ka jawaab celiyay wararka ku aadan inuu khilaaf kala dhexeeyo tababare Julen Lopetegui – Gool FM
Toni Kroos oo ka jawaab celiyay wararka ku aadan inuu khilaaf kala dhexeeyo tababare Julen Lopetegui
(Real Madrid) 24 Okt 2018. Xidiga khadka dhexe ee kooxda Real Madrid Toni Kroos ayaa difaacay macalinkiisa Julen Lopetegui, wuxuuna codsday inuu sii wato shaqadiisa xiliyada soo aadan.
Toni Kroos ayaa wuxuu hadalkiisan jawaab celin kaga dhigay eedeymaha iyo dhaleeceenada uu helayo macalinka reer Spain kadib natiijo xumi ku timid kooxda iyo sidoo kale wararka ku aadan inuusan xiriir wanaagsan la lahayn tababare Lopetegui.
“Waxaan dooneynaa inuu kasii shaqeeyo kooxda , waa tababare wanaagsan, taasi waa fikrada aan qabo”.
“Waxaan qabaa in qof walba uu daawaday kulamadii lasoo dhaafay, waxaan u maleenayaa in xaalada aysan wanaagsaneen, laakiin ugu dambeyn waxaan guuleesanay kulankii Viktoria Plzen”.
“Waxaan sameyneynaa wax walba oo aan sameyn karno si aan u gaarno natiijooyin wanaagsan, waxaan kalsooni ku qabaa inaan badali karno xaalada uu haatan ku sugan yahay Lopetegui”.
War saxaafadeed soo baxay dhawaan ayaa lagu sheegay inuusan wanaagsaneen xiriirka ka dhexeeya Toni Kroos iyo tababare Julen Lopetegui, taasoo sababtay in laacibka reer Germany uu ka maqnaado kulankii Levante.
Shaxda rasmiga ah ee Liverpool vs FK Crvena Zvezda
Liverpool oo Guul Raxaa ka gaartay FK Crvena Zvezda iyo Barcelona oo La'aanta Messi garaacday Inter Milan